यी ७ नेपाली कलाकारहरु ,जो अमेरिकाको बसाई छोडेर फर्के नेपाल , हेर्नुस् को को हुन् ? - Medianp.com
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००६:०६0
काठमाडौँ । प्राय नेपालीहरुलाई अमेरिका गएर दाम र नाम कमाउने ठुलो रहर हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष डिभी भर्नको लागी लाइन हुन्छ । तर अमेरिका जाने रहर नेपाली युवाहरुमा मात्र होइन् , चर्चित कलाकारहरुको पनि हुन्छ । त्यसैले प्राय कलाकारहरु केही समय नेपाली चलचित्र रमाउछन् । त्यसपछि अमेरिका भाँसिने चलन रहेको छ । तर आज हामी अमेरिका भाँसिने होइन् , अमेरिकाको बसाई छोडेर नेपाल फर्केका ७ कलाकारको बारेमा कुरा गदै छौँ । हेर्नुस् को को हुन् ?
नेपाली चलचित्र जगतका चर्चित अभिनेता सरोज खनाल पनि चलचित्र क्षेत्रलाई त्यागेर अमेरिका भाँसिएका थिए । तर अहिले उनी लामो समयको अमेरिका बसाईपछि सधैको लागी अमेरिका त्यागेर नेपाल फर्किएका छन् । भर्खरै उनले चलचित्र ब्रेकअपमा समेत अभिनय गरिसकेका छन् । हाल उनी विभिन्न चलचित्रमा ब्यस्त छन् ।
कुनै समयकी चर्चित नायिका गौरी मल्ल पनि लामो समयको अमेरिका बासाईपछि अमेरिका त्यागेर नेपाल फर्किएकी छिन् । उनले धेर नेपाली र केही विदशी चलचित्रमा समेत काम गरिसकेकी छिन् । उनले बसन्ती ,मामाघर ,सन्यास , खानदान जस्ता थुप्रै चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी छिन् । हाल अमेरिका बसाई त्यागेर नेपाल फर्केपछि चलचित्र र टेलिभिजन कार्यक्रममा निकै ब्यस्त छिन् ।
नेपाली चलचित्र जगती चर्चित र सुन्दर नायिका करिश्मा मानन्धर पनि लामो समयको अमेरिका बसाई पनि नेपाल फर्किएकी हुन् । उनी अहिले फिल्म निमार्णमा समेत सक्रिय छिन् । उनको पहिले चलचित्र सन्तान हो । तर रोजक कुरा त के छ भने उनी अमेरिकाको बसाई छोडेर नेपाल फर्केपछि चलचित्रमा काम गर्नुका साथै कक्षा ८ बाट पढेर एसईइ परिक्षा दिएकी थिइन् । जसले उनी निकै चर्चामा आइन् ।
चर्चित कलाकार यमन श्रेष्ठ पनि लामो समयको अमेरिका बसाईपछि आमाको स्वमस्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि नेपाल फर्किएका हुन् । उनी बरिष्ट हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठका छोरा हुन् । उनले अमेरिकामा नै विवाह गरेका थिए । हाल उनी हँस्य टेलिश्रृङखला खासखुस , चलचित्र र गायनमा ब्यस्त छन् ।
अहिले आयुष्मान देशराज जोशीसँग विवाह हुन लागेकी प्रियंका कार्की पनि अमेरिका बसाईपछी नेपाल फर्किएकी नायिका हुन् । उनी आफ्नो अध्ययनको शिलशिलामा केही समय अमेरिका बसेकी थिइन् । तर नेपाल फर्केपछि प्रियंका हाल चलचित्र र विभिन्न कार्यक्रममा ब्यस्त छिन् । जो अहिले विवाह र चलचित्रको कुराले चर्चामा आइरहन्छिन् ।
चर्चित हास्य कलाकार राजाराम पौडेल पनि लामो समयको अमेरिका बसाईपछि नेपाल फर्केका हुन् । उनी जनयुद्धको बेला छोरा र अध्ययनको लागी अमेरिका गएका थिए । तर अहिले अमेरिकाबाट नेपाल फर्केपछि चलचित्र , टेलिश्रृखला , कार्यक्रममा ब्यस्त छन् । हाल उनी चर्चित कमेडी शो मुन्द्रेको कमेडी क्लबमा ब्यस्त छन् ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रका हयान्डसम नायक भनेर चिनिने रमेश उप्रती पनि लामो समयको अमेरिका बसाई पनि नेपाल फर्किएको कलाकार हुन् । उनी चर्चित अभिनेता गणेश उप्रेतीको छोरा हुन् । उनले अमेरिकाबाट फर्के लगतै चलचित्र ऐश्वर्यामा अभिनय गरेका थिए । जुन चलचित्रले निकै चर्चा बटुलेको थियो । जसले गर्दा चलचित्रमा उनीसँग जोडि बाधिएकी नायिका दिपिका प्रसाई पनि छोटो समयमा नै चर्चित भएकी थिइन् ।